Azia Atsimo: andron’ny bilaogin’ny horohorontany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2018 13:34 GMT
Indro ny andron'ny bilaogin'ny horohorontany !
Tamin'ny taon-dasa (2004), nanjary fitaovana amin'ny fanangonana fanohanana ho an'ny fotokevitra sy hanasongadinana ireo olana izay hadinon'ny Fampitam-baovao Mahazatra ny bilaogy. Nanao fanambarana manan-danja i Sepia Mutiny- fa tsy nisy ny fialan-tsiny ho an'ny tsy manome, raha ireo izay manana ny kely eo am-pelan-tanany kosa no manome betsaka .
Noho izany, raha nanome tsiny ireo firenena i Kofi Annan noho ny tsy fanomezana afatsy ny iray ampahafolon'ny zavatra izay nilain'ireo niharam-boina tamin'ny horohorontany, ireo niharam-boina tamin'ny tsunami -izay mbola mijaly noho ny voina nahazo azy ireo izay nahafatesan'olona miisa 200.000 nanerana an'i Azia dia nanome fanomezana amin'ny ezaka fanampiana tamin'ny horohorontany tao an-toerana. Angamba mijaly noho ny ” harerahana noho ny voina” izao tontolo izao.
Raha namaly ity antso ity – nanambara ny Andron'ny Bilaogy Ho An'ny Horohorontany i DesiPundit tamin'ny 26 okt 2005. Niantso ireo bilaogera eran-tany mba hampiasa ny heriny
Mangataka ny tsirairay aminareo izahay mba handefa lahatsoratra fohy momba ny horohorontany, ary hitarika ny mpamaky anareo ho any amin'ny lalana azo antoka hanomezana ezaka fanampiana… Ny vola dolara izay arotsaka, ampitomboin'ireo bilaogera maro, dia ho entina hanampiana ireo olona hanorina indray ny fiainany.
Namaly ity antso ity ireo bilaogy manerantany . Naneho ny heviny i Instapundit. Nivarotra T-shirts i Chapati Mystery ary nanaovana fanampiana ho an'ireo niharam-boina tamin'ny horohorontany ny vidiny. Antso ho an'ireo mpanatontosa rakipeo. Ireo lahatsoratra hafa tamin'ny Andro Famahanana Bilaogy Ho An'ny Horohorontany – Sepia Mutiny, De Growchy Owl, Truth and Beauty, Veiled4Allah, Travel tales from India.
23 ora izayIndia